Shan News ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2'+posttitle+''; document.write(trtd); j++; } document.write('
အချစ်ဆုံး ရင်သွေးငယ် (နန်းမွေငယ်)
ရှမ်းပြည်နယ် ကလောမြို့အထွက် ရွှေဇင်ယော်စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်အနီးရှိ ဒေသထွက်လက်ဆောင်များ ရောင်းချသော ဆိုင်တန်းမှ “ ၉၆၉ မေရှမ်း ” နှင့် “ ၉၆၉ ရွှေစင် ”အမည်ရှိ ဆိုင်းဘုတ်ရေးထားသော ဆိုင်ခန်းနှစ်ခန်းအား ဇွန် ၁၄ ရက်မနက်ပိုင်း တွင် More
ဗိုလ်ချုပ် ဆေထင် ပြောစကားများက ပြည်ထောင်စုကြီးတစ်ခုလုံး ပြိုကွဲသွားအောင် သွေးထိုးလှုံ့ဆော် လိုက်တဲ့ သဘောလား….?
ဆက်ကြေးကောက်၊ ဘိန်းခွန်ကောက်၊ သစ်ခိုးထုတ် တဲ့ တရားမ၀င်လုပ်ရပ်တွေကိုတော့ လုပ်လို့မရတော့ ဘူးပေါ့။ ဒ့ါကြောင့် ဦးဆေထင် လက်နက်မစွန့် ချင်တာ More
*** ရှမ်းနီခေတ် သတင်းဂျာနယ် မကြာမှီ ဖြန့်ချီတော့မည် ***
ရှမ်းနီခေတ် သတင်းဂျာနယ်ကုို ရှေ့လ ပထမအပ်တွင် ထုတ်ဝေဖြန့်ချီမည်ဟု သတင်းဂျာနယ်ဖြစ်မြောက်ရေး အားကြိုးမာန်တက် လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ သျှမ်းနီလူငယ်ကွန် အဖွဲ့သားများက ဆုိုပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့ ရှေ့လာမည့် ဇူလုိုင်လ လ ပထမ အပတ်ထဲမှာ ထုတ်ဝေဖြန့်ချီနုိုင်ဖုို့ ကျနော်တုို့လုပ်ထားပါတယ်.. ကျနော်တုို့ တုိုင်းရင်းသားတုိုင်းဟာ မိမိဒေသတွင်း ဖြစ်ပျက်နေမှု အလုံးစုံကုို အခြားဒေသလူထုတွေ သိအောင်မီဒီယာနဲ့ မီးမောင်း ထုိုး ပြသရမဲ့ ခေတ်ဖြစ်နေပြီ ဒါကြောင့် ကျနော်တုို့ သျှမ်းနီလူငယ်တွေက ဒီဂျာနယ်ကုို မရရအောင် ထုတ်မယ်ဆုိုပြီး လုပ်ကြတာပါ.. ထုပ်လုပ်မှုကုိုတော့ မန္တလေးမှာပဲ ကျနော်တုို့ လုပ်မှာဖြစ်တယ်လုို့ အယ်ဒီတာ စုိုင်းအောင်မျိုးလွင်က ဆုိုပါသည်။
သျှမ်းနီခေတ်က သျှမ်းနီဒေသတွင်း ဖြစ်ပျက်နေသော နုိုင်ငရေး၊ စီးပွားရေးလူမှုရေး၊ ပညာရေ၊ ဘာသာရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါပြသာနာ စသည်တုို့ကုို အဓိကထားရင်း တိုင်းရင်းသားဒေသ အသီးသီးတွင် တိုင်းရင်းသားအားလုံး၏ အသံများ ပြန်ကြားနိုင်မှု အဓိကထား ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်မှာ ဖြစ်တယ်လုို့ ဂျာနယ်ဖြစ်မြောက်ရေး ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် အယ်ဒီတာ တဦးဖြစ်တဲ့ စုိုင်းမောင်အောင်က ဆုိုပါသည်။
မြန်မာပြည်ကြီးဟာ တုိုင်းရင်းသာတွေနဲ့ စုပေါင်းနေထုိုင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီနေ့ ပွင့်လင်းလာတဲ့ မြန်မာ့ လူဘောင် အဖွဲ့စည်းမှာ တုိုင်းရင်းသားတုို့၏ မီဒီယာအခန်း ကဏ္ဍဟာ အရေးကြီးလာပြီဖြစ်တဲ့ အလျှောက် သျှမ်းနီလူငယ်တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုနဲ့ မိမိတုို့ အမျိုးသား ဂျာနယ် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက် ၀မ်းသာဂုဏ်ယူမိပါကြောင်း စုိုင်းအောင်ဆုိုင် (ခေတ္တချင်းမုိုင်) က ဆုိုပါသည်။
သျှမ်းနီလူမျိုးတုို့သည် အဓိကအားဖြင့် ကချင်းပြည်နယ်နှင့် စစ်ကုိုင်းတုိုင်း အထက်ပုိုင်း အများအပြာနေထုိုင်ကြပြီး သျှမ်းပြည်နယ် မုိုးမိတ်၊ မဘိမ်း၊ မအုိုး၊ မှုဆယ်၊ နမ့်ခမ်း တုို့တွင်လည်း နေထုိုင်ကြသည်။
တစ်ဦးလျှင် ကျပ်သုံးသိန်းဖြင့် ဘင်္ဂါလီများခိုးသွင်းသည့်အမှု နောက်ဆက်တွဲဘင်္ဂါလီဆယ်ဦး ထပ်မိ
ဘင်္ဂါလီကိုးဦးအား ရန်ကုန် သို့ ခိုးပို့ရန်ကြိုးစားခဲ့သည့် လူကုန် ကူးဂိုဏ်းကို စစ်ဆေးနေစဉ်အဆို ပါအမှု၏ နောက် ဆက်တွဲအဖြစ် နောက်ထပ် ဘင်္ဂါလီဆယ်ဦးကို ထပ်မံဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီး နေပြည် တော်မှ ကွပ်ကဲမှုဖြင့် ရခိုင်ပြည် နယ်ဒုတိယရဲမှူးဦးဆောင်ကာ ခုံရုံးဖွဲ့ စစ်ဆေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
‘‘ပြည်နယ်ဒုတိယရဲမှူး ဦး ဆောင်ပြီး စစစ်နေပြီ။ ဒီအမှုကအ ဖွဲ့လိုက်၊ လူကုန်ကူးဂိုဏ်းအနေနဲ့ လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ ယူဆရတယ်။ သူတို့ ကားနဲ့သယ်ပြီး လမ်းမှာ ချထားခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂါလီဆယ်ဦးထပ် ဖမ်းမိတယ်။ ဒါကြောင့် စုံစမ်းစစ် ဆေးရေးခုံရုံးဖွဲ့ပြီးစစ်နေတာ’’ ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပြည် နယ်အဆင့် ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဇွန်လ၂၇ရက်က ဘင်္ဂါလီကိုး ဦးသယ်လာသည့် ကားတစ်စီးကို အမ်းမြို့၊ ပဲ့ပဒုံစစ်ဆေးရေးဂိတ် တွင် ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ကိုအခကြေးငွေယူ၍ ရန်ကုန်သို့ကား ဖြင့်သယ်ပို့ရန် ကြိုးစားသည့် သံ သယရှိသူသုံးဦးကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ သည်။ ဇွန်လ၂၉ရက် နံနက်တွင် ဘင်္ဂါလီ ဆယ်ဦးကို ကျောက်တော်-အမ်းကားလမ်းမ ဘေးရှောက်ချုံရွာတွင် ထပ်မံဖမ်းနိုင်ခဲ့ပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများက စုစုပေါင်းဘင်္ဂါလီ ၁၉ ဦးအား ရန် ကုန်သို့ ပို့ရန်စီစဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။
‘‘ကားနဲ့ သယ်လာတဲ့သူတွေ က လူကြီးလမ်းကြောင်းလို့ပြော ပြီး စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုဖြတ်ဖို့ကြိုး စားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ က မ ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက် လို့ အရေးကြီးနေတော့ လိုအပ်ရင် တာဝန်ရှိသူတွေကို အချိန်မရွေး မေးစေချင်ပါတယ်။ ဒီနေ့အထိ စု စုပေါင်း ဘင်္ဂါလီ ၁၉ဦးကိုထိန်း သိမ်းထားပါတယ်’’ဟု အမ်းမြို့မ ရဲစခန်းမှူး ဒုတိယရဲမှူး သောင်း လွင်ကပြောသည်။
ကားဖြင့် သယ်ဆောင်လာ သူများသည် ဘင်္ဂါလီတစ်ဦးလျှင် သုံးသိန်းကျပ်ဖြင့် လူကုန်ကူးခြင်း ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အား ဥပဒေပုဒ်မ ၃၆၇ဖြင့်အမှုဖွင့်ထားကာ ဘင်္ဂါလီ ၁၉ဦးကို လ၀ကဥပဒေဖြင့်အမှုဖွင့် စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နှင့် ကချင်ပြည်နယ်ရှိရှမ်းလူမျိုးရွာသားများ ရှမ်းရွာများ ထံသို ဆတ်ကြေးအဓမ္မ တောင်းခံခြင်း ၊လူသစ်အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းများ အပေါ် ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (SSA/SSPP & SSA/RCSS) အနေ ဖြင့်ရှမ်းလူမျိုးများ အရေး ဦးစားပေးကာ ကန့် ကွက်ခြင်း သို့ မဟုတ် ပြန်ကြားချက် တစ်စုံတစ်ရာ ထုတ်ပြန်ခြင်း KIA ထံသို ရာဇသံ ပေးပို့ ခြင်း များ ဆောင်ရွက် နေခြင်း ရှိမရှိ SSAမှ တာဝန်ရှိသူများမှ ဖြေကြားပေးစေလို ပါသည်ခင်ဗျား.
TNLA ကြောင့် ပလောင်ဒေသငြိမ်းချမ်းရေး အလှမ်းဝေးနေဦးမည်
Posted by Unknown at 12:35:00 PM0comments
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ မာန်အောင် ကျေးရွာအနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲကြောင့် ဒီနေ့အချိန်ထိ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲ ပါပဲ။ သေနတ်သံတွေကြားထဲမှာ မာန်အောင်ရွာလေးကတော့ တိတ်ဆိတ်ငြိ်မ် သက်နေလို့ ရွာသူရွာသားတွေ လွတ်ရာကျွတ်ရာ ထွက်ပြေးသွားကြပြီလို့ သတင်းတွေလည်း ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
တချို့ နာမည်ကြီး ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ မီဒီယာတွေမှာဆိုရင် အစိုးရတပ်နှင့် TNLA တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား မှုကြောင့် ဒေသ ခံ(၂၀၀၀)ကျော် နမ့်ခမ်းမြို့ပေါ်ကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြထားကြ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နမ့်ခမ်းမြို့ပေါ်ကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူတစ်ဦးတစ်လေတောင် မရှိပါဘူး။ ဒေသခံပလောင် တိုင်းရင်းသားတွေဟာ တိုက်ပွဲတွေကြားထဲမှာ ကျီးလန့်စာစား ဘ၀နဲ့ နေနေရတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း မီဒီယာတွေရဲ့ ၀ါဒဖြန့်မှုကြောင့် ကြောက် လန့်ပြီး အိုးအိမ်ပစ်ကာ ထွက်ပြေးရမလို ဖြစ်နေပါပြီ။
တကယ်တမ်း နစ်နာတာကတော့ ဒေသခံပလောင်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ TNLA အဖွဲ့ရဲ့ သူများကြိုးဆွဲရာ ကနေတဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့် မြေဇာပင်ဘ၀ရောက်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ TNLA အဖွဲ့ဆိုတာ အမည်ခံသာဖြစ်ပြီး လူ၊ လက်နက် အင်အား အနည်းငယ်မျှသာရှိတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ နမ့်ခမ်း၊ ကွတ်ခိုင်၊ တာမိုးညဲ စတဲ့ မြို့နယ်တွေဟာ TNLA ရဲ့ နယ်မြေဖြစ်ပေမယ့် တကယ်တမ်းနေရာယူ မင်းမူနေတာကတော့ KIA အဖွဲ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် TNLA ဆိုတာ KIA ရဲ့ ထားရာနေ စေရာသွားနေရတဲ့ နယ်ရုပ်တစ်ရုပ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
KIA ကြိုးဆွဲရာ ကနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့် သူတို့ခိုင်းသမျှ လုပ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ရှမ်းမြောက်မှာ တိုက်ပွဲတွေ ကို ဖန်တီးပြီး KIA က TNLA အဖွဲ့ကို ထိုးကျွေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရတပ်တွေနဲ့ TNLA အဖွဲ့ တွေ့ဆုံ တိုက်ပွဲဖြစ်ရင် ထိခိုက်ကျဆုံးမှုများတာ TNLA အဖွဲ့ပါ။ အောင်မြင်မှုရရင် နာမည်ကြီးမယ်ဆိုရင် KIA အဖွဲ့က၀င်ပြီး နေရာ ယူလိုက်တာပါ၊ ခံစရာရှိရင် အပြစ်ပုံချစရာရှိရင် TNLA အဖွဲ့ကို လွှဲချတာဖြစ်ပါတယ်။
TNLA အနေနဲ့ KIA အတွက် သြဇာခံတိုက်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲနေပေမယ့် ဘာအကျိုးခံစားခွင့်မှ မရပါဘူး။ KIA ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေ ကတော့ ဇိမ်ခံကားစီး၊ မူးရူးသောက်စားပျော်ပါးကာ လောကစည်းစိမ်ခံနေချိန်မှာ TNLA ခေါင်းဆောင်တွေခမျာ ထမင်းနပ်မှန်အောင် မနည်းရုန်းကန်နေရတာပါ။ KIA က ဆက်ကြေးကောက်တယ်၊ သစ်မှောင်ခို၊ ကျွဲ/နွားမှောင်ခို၊ ဘိန်းမှောင်ခိုတွေကနေ ပိုက်ဆံရပြီး ကြီးပွားချမ်းသာနေကြပြီ။ TNLA အဖွဲ့ကတော့ ဘာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ လုပ်စားစရာမရှိသလို KIA ရဲ့ ပေးစာကမ်းစာကို စားနေရတဲ့ဘ၀ ဖြစ်ပါတယ်။
KIA ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတဲ့ TNLA အဖွဲ့အနေနဲ့ မိအေးနှစ်ခါနာ ဖြစ်နေရပါပြီ။ ပထမတစ်ခုက အစိုးရတပ်တွေနဲ့ TNLA တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ စစ်မြေပြင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကျီးလန့်စာစားဘ၀ ရောက်နေတယ်၊ ဒုတိယတစ်ချက်က ကိုယ့်ပလောင်တိုင်းရင်းသားတွေကို KIA က လူသစ်စုရင်လည်း TNLA က ငြိမ်ခံပြီး ရပ်ကြည့်နေရုံကလွဲလို့ ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး။
TNLA ဟာ အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီမှု မရသေးတဲ့အဖွဲ့ဆိုပြီး နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်စောနေသောအဖွဲ့ အဖြစ် ကင်ပွန်းတပ်ခံထားရပါတယ်။ TNLA အနေနဲ့ ဘယ်လိုပဲ အကြောင်းပြနေပါစေ၊ တိုက်ပွဲတွေ ရပ်တန့်စေချင်ရင် ငြိမ်းချမ်းရေး ယူရုံကလွဲလို့ အခြားနည်းလမ်းမရှိပါဘူး။ ကိုယ့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းကောင်းစားဖို့ KIA သြဇာခံအဖြစ် ဆက်လုပ်နေဦး မယ်ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘ၀ဟာ တိုက်ပွဲတွေကြားမှာပဲ ပြေးလွှားပုန်းရှောင်ရင်း စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ဘ၀ ရောက်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ TNLA အဖွဲ့ကြောင့် ပလောင်တိုင်းရင်းသားတွေ မြေဇာပင် ဖြစ်ရတော့မှာလား ?? အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေနဲ့အတူ TNLA ကြောင့် ပလောင်ဒေသငြိမ်းချမ်းရေး အလှမ်းဝေးနေဦးမည်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
Wednesday, October 2, 2013 ကင်ပေါင်းကြော်(သို.)အင်းလေးကင်ပေါင်းကြော်ပာု ခေါ်ကြပါတယ်.. ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအစားစာ လေးပါ. ၀ါဆိုနဲ. သီတင်...
ဗိုက်ကြောပြတ်ခြင်း ကုသရန်၊ ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းများ
25.9.2013 ၀ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အကွေး အဆန့်များခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ အ ကြောပြတ်ခြင်း (stretch mark) ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ ၀မ်းဗိုက်၊ ပေါင်၊ တင်ပါး၊ ရင...
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဦးချိုရှိသော နွား
ဇန်န၀ါရီ(၂၉) ဂင်းနစ်စံချိန်တင်ခဲ့တဲ့နွား ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း Missouri ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်က စံချန်တင်ခဲ့...
မြန်မာ-တရုတ် ဘသာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းအတွင်း ဓာတ်ငွေ့ ထည့်သွင်း
ဇွန်လ ၂၃ရက် မြန်မာ-ရုတ်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းတွင်သွယ်တန်းထားသည့် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းအတွင်း မြန်မာပြည်အပိုင်းဖြစ်သည့် ကျောက်ဖြ...
“မိဘမဲ့ကလေးများကျောင်းနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း လိပ်စာများ”
ဇွန်လ ၂၃ရက် ပရဟိတလှူဒါန်းချင်သူများအတွက် ကူညီမှု လိုအပ်သောနေရာလေးများကို ဖော်ပြပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သီလရှင်စာသင်တိုက် ရွှေပုန်းပွင့်ဘုရားလ...
ပြည်လုံးကျွတ်အပစ်ရပ်ရေး ကမ်းလှမ်းချက်ကို လိုလားလို့ RCSS/SSAပြော
ဇွန်လ ၂၅ ရက် မြန်မာနိုင်ငံကို လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ RCSS/SSA တောင်ပိုင်း ဥက္ကဌ ဦးယွက်စစ်(ယာ) နှင့် ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းတို့ကို တွေ့ရစဉ် ...
ပန်ဆန်း၏ အနာဂတ် စိုးရိမ်ဖွယ်အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိ
မကြာသေးမီရက်ပိုင်းအတွင်း “၀”တပ်ဖွဲ့ဗဟို ပန်ဆန်းက ထုတ်ပြန်တဲ့ ရာထူးပြောင်းရွှေ့မှုအမိန့် ကြေညာချက်ဟာ “၀”အဖွဲ့အပေါ် ပေါက်အုပ်စုရဲ့ ရေရှည်အာဏာရ...
ဆက်တိုက် ဖြစ်နေသော မြေယာ အငြင်းပွားမှု ရှမ်းနှင့် စစ်ကိုင်းတွင် ထပ်မံဖြစ်ပွား
(ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၁၄) ရှမ်းပြည်နယ် နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ကသာမြို့နယ်ရှိ ကြံစိုက်ဧက ငါးသောင်းမြေယာ ပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားမှုကို မြေယာ ...
Monday, October 7, 2013 ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်သည် အစိုးရ လုပ်ငန်းများပင် မလွတ်ဘဲ ပေးဆောင်ရပြီး လိမ်လည်တိမ်းရှောင် ထိမ်ချန်ထားပါက မည်သူ့ကိုမဆ...
ဘယ်(လ)ဂျီယံ နိုင်ငံ ဘရပ်ဆဲလ် မြို့ရှိ ဥရောပ သမဂ္ဂ ဌာနချုပ် တွင် မြန်မာ့ ဒီမို ကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား တွေ့ ရစဉ်